Goob tolli toos ah
Bartack iyo tolida qaabka
Button iyo luul ku lifaaqan
Cunug ka bixi gacanta
Mashiinka dharka lagu tolo oo gaar ah
Badbaadiyaha warshad dharka: Qalabka jeebka xawaaraha sare ku sameeya
Qalabka taxanaha ah ee loo yaqaan 'TS-199 set' jeebka waa mashiin xawaare sare oo otomaatig ah oo loogu talagalay tolidda dharka jeebka. Mashiinadan dejiya jeebku waxay leeyihiin saxnaan tolid tayo sare leh. Marka loo barbardhigo soosaarka gacanta ee soojireenka ah, waxtarka shaqada waxaa lagu kordhiyay 4-5 jeer. Mid ka mid ah mashiinka jeebka sameeya ayaa ...
Dunida Koowaad: Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Wali miyaad ka walwalsan tahay inaadan helin shaqaale xirfad leh? Wali miyaad ka walwalsan tahay kor u kaca qiimaha shaqaalaha? Wali miyaad ku degdegaysaa amarka in la dhammeeyo? Weli miyaad ku dhibsanaysaa kakanaanta iyo gaabiska jeebka tolidda loogu ridayo jeebka? Shirkaddayadu waxay dhowaan soo saartay qalab si buuxda otomaatig ah ...
Dhalaali kara wax soo saarka
Shirkaddu waxay dhistay dhisme warshad cusub waxayna ku dartay 20 khadadka wax soo saarka dhalaalaya oo dhalaalaya, iyada oo wax soo saarkeedu maalin walba yahay 15 tan. Hadda waxaan haynaa koox farsamo oo xoog leh, oo aan la kulanno baahiyaha dalal kala duwan oo loogu talagalay ISTICMAALKA maaskarada kala duwan iyadoo loo eegayo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha kala duwan ee aan caadiga ahayn cus ...
Dhar aan tolmo lahayn oo dhalaalay wax soo saar dhar ah
Shirkadeena waxay lashaqeysaa Changying dhar aan tolmo laheyn Co., Ltd si loo kordhiyo khadadka wax soo saarka. Hadda wax soo saarka maalinlaha ah ee dharka aan tolmada lahayn waa 10 tan, wax soo saarka dharka dhalaalayana waa 3 tan. Si adag loo kormeeray dhammaan alaabta ceeriin ah, Tayada ku jihaysan laga soo bilaabo waxyaabaha aasaasiga ah illaa masterbatch.
Dukaanka Waxsoosaarka Maska
Waqtigaas oo si ba'an loo isticmaalay fayraska 'Coronavirus' ee Shiinaha, shirkadeena waxay ka heshay tilmaamaha dowladda inay soo saarto mashiinka maaskaro iyo maaskarada. Shirkaddayadu waxay sidoo kale si dhakhso leh u abaabushay shaqaale farsamo si ay u fuliyaan R & D iyo wax soo saarka. Maaskarada aan soo saarnay waxay gaareen heerkii ugu sareeyay ee indu ...
Topsew Qalabka tolida Tooska ah Co., Ltd.
Ilaa dhamaadka 2019, waxaan haynaa xariiq buuxa oo mashiinka jeexjeexa, mashiinka dharka tolida, bartanka, Walaalka mashiinka tolida, Juki nooca mashiinka tolida, Batoonka sifaha, iyo mashiinka dhejiska luul, iyo noocyada kale ee mashiinada tolida otomaatiga ah. 1. Mashiinka dejiya jeebka: jeebka taxanaha ah ee 199 ...
Badhtamihii Nofeembar, Waxaan U Tagnay Ameerika Agent Tababbar Jeeb otomaatig ah
Tababar ay ka mid yihiin: 1. sida loo sameeyo barnaamij. 2. Sida wax looga beddelo barnaamijka. 3. sida loo beddelo clamps-ka loona hagaajiyo mashiinka jeebka jiiniska, intaas ka dib waxaan barnaa sida loo beddelo xajinta oo loo hagaajiyo mashiinka jeebka shaati. 4. Sida loo xaliyo dhibaatada marka ...
Dhamaadka Nofeembar, 2019, Waxaan u aadnay Warshadda Macaamiisha Bangladesh ee Tababbarka Mashiinka Qalabka Jeebka ah.
Kahor intaysan isticmaalin hal mashiin bir bir ah, ka dibna mishiin otomaatig ah jeebka loo yaqaan semi-automatic. Hada isticmaal mashiinadeena jeexjeexa jeebka bilaashka ah ee birta, wuxuu badbaadin karaa shaqaalaha, iyo waqtiga. Farsamo yaqaan macaamilku aad ayuu wax u baranayaa. Markay baranayaan, sidoo kale waxay sameeyaan rikoodh. Farsamayaqaanadu aad ayey u caqli badan yihiin. Kadib sev ...
No.1 wadada Yewang, magaalada Yexie, degmada Songjiang, Shanghai, Shiinaha